सामाजिक सञ्जालमा नायिका शिल्पा किन रोइन? प्रस्नमा केकीले बोलिन् यस्तो! – PathivaraOnline
Home > समाज > सामाजिक सञ्जालमा नायिका शिल्पा किन रोइन? प्रस्नमा केकीले बोलिन् यस्तो!
admin July 14, 2019 समाज	0
काठमाडौं। नायिका शिल्पा पोख्रेलले केही दिन अगाडि आफ्ना श्रीमान निर्माता छबीराज ओझाबाट असुरक्षित भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी प्रभाग टेकुमा उजुरी दिएको प्राय सबैमा अवगत नै छ। उनले हालेको उजुरीको सुनुवाई र बहस पनि भईसकेको छ । शिल्पा र छबी बिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । तर, कानुनी बहस सक्किए पनि फिल्म वृतमा शिल्पाले खेपेको घरेलु हिंसाको बहस तिब्र भईरहेको छ । कलाकार र कलाकर्मी शिल्पालाई अन्याय भएको भनिरहेका छन् ।
नाम नै राख्न नसके पनि कलाकार हरु कोही शिल्पा त कोही छबीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । यस्तैमा शिल्पाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर निस्के पछी मिडिया समक्ष मैले जे भोगेकी छु, जे सहेकी छु, मलाई मात्र थाहा छ भनेर रोएकी थिईन । यसै प्रसँगलाई लिएर नायिका केकी अधिकारीले उनी किन रोईन भन्ने प्रश्नको जवाफ स्टाटस मार्फत दिने कोशीस गरेकी छिन्।
उनले तपाँई हामी बीच भएका सबै ‘उनी’ हरुलाई घरेलू हिंसा बिरुध्द बोल्ने साहस मिलोस्। साहसी सबैलाई न्याय मिलोस् भन्दै गर्दा उनको त्यो स्टाटस कहीं कतै शिल्पा कै लागि हो भन्ने लाग्छ । अझ उनले कानको जाली फुटेको कुरा जोडेकाले उनको स्टाटस शिल्पा कै लागी हो भन्दा फरक नपर्ला तर उनले आफ्नो यो बिचार सम्पूर्ण घरेलु हिंसा भोगेका उनीहरु’ प्रति समर्पित रहेको उल्लेख गरेकी छिन । हिजो राष्ट्रपति भवनमा आयोजित राष्ट्रिय फिल्म अवार्ड कार्यक्रममा सिल्पा र केकी केहि समय गफिएका थिए ।
नायिका केकी अधिकारीको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै: ऊनी रोईन्। मैले जे भोगेकी छु। जे सहेकी छु। मलाई मात्र थाहा छ। यति भन्दै उनी रोईन्। उनी किन रोईन्? उनी रोईन् किनकी वहाँलाई उनीले अरुसँग बोलेकै मनपर्दैन रे। उनी रोईन् किनकी आज एकैछिन् अरुसँग बोलेको वहाँले देखि त हाल्नुभो। उनी रोईन् किनकी वहाँ साथ दिने साथी होईन, कमजोरी केलाउने काजी होइबक्सदोरहेछ , दण्ड दिने हुकुम होइबक्सदोरहेछ।
उनी रोईन् किनकी उनले आज न्याय माग्ने हिम्मत गरिन्। उनी रोईन् किनकी न्याय माग्दा, व्यथा बुझ्ने न्यायमूर्ति पाईनन्। उनी रोईन् किनकि थप्पड हान्नु नै अपराध हो तिमीले न्याय पाँउछौ भनेको सुनिनन्। ऊनी रोईन् किनकी उनलाई उल्टै सोधियो के त्यो थप्पडले कानको जाली फुटेकै हो त? उनी रोईन् किनकी उनीले जे भोगेकि छिन्। जे सहेकी छिन्। उनीलाई मात्र थाहा छ। (तपाँई हामी बीच भएका सबै ‘उनी’ हरुलाई घरेलू हिंसा बिरुध्द बोल्ने साहस मिलोस्। साहसी सबैलाई न्याय मिलोस्।) केकी अधिकारी
दुर्घटनामा एकै परिवारका ६ जनाको दुःखद निधन भएपछि उदयपुरमा आज सार्वजनिक बिदा
सोनिका र पारसको भित्री सम्बन्ध यस्तो रहेछ, मर्न लागेको बुढाको बिवाह भयो मेरो नहोला भन्दै मिडियामा आए मुकुन्द घिमिरे (भिडियो)